बाग्मतीमा अब अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री बन्दै ? « Jana Aastha News Online
बाग्मतीमा अब अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री बन्दै ?
प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:००
नेकपा विभाजन र एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द उत्कर्षमा पुग्दा प्रदेश सरकारहरु धर्मराउन थालेका छन् । विभाजनको असर गण्डकी प्रदेशमा परिसकेको छ । गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर काँग्रेस नेतृत्वमा विपक्षी गठवन्धनको सरकार बनेको छ ।
बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विकसित घटनाक्रमहरुले गण्डकीपछि मुख्यत: बागमती,लुम्बिनी र प्रदेश १ सरकारमाथि चुनौती थपिएको छ । तीनै प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ,तर अन्तरद्वन्दका कारण कुनै पनि सरकार सुरक्षित छैनन् । अवस्था कस्तो छ भने,यी दुवै लुम्बिनीबाहेकका दुई प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल पक्ष बलियो स्थितिमा छ । सो पक्षको नगन्य उपस्थिति रहेको गण्डकी सरकार जोगाउनसमेत नसकेको ओली समूहलाई यी दुई प्रदेश सरकार जोगाउन फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा सुनिन थालेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यशैलीलाई लिएर एमालेभित्रै चरम असन्तुष्टि बढेपछि कुनैपनि बेला सरकार ढल्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । प्रदेशसभाको अंकगणितमा झण्डै काँग्रेस र माओवादीकै हाराहारीमा रहेको माधव नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिन नसके मुख्यमन्त्री पौडेललाई बजेट पास गराउन कठिनाइ हुने देखिएको छ । बजेट पास नभए सरकार ढल्ने भएकाले अहिले मुख्यमन्त्री पौडेल माधव खेमालाई फकाउन लागि परेको चर्चा भैरहेको छ ।
गत वर्ष बजेट पास गर्न परेको महाभारत सुनाउँदै एक नेता भन्छन्, ‘झण्डै झण्डै बजेट फेल हुने अवस्था आइसकेको थियो । पछि हाम्रै प्रयासमा कार्यदल बनाएर निकास निकाल्ने सहमति भएको हो,तर सहमतिलाई धोति लगाइयो ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको बजेट पास गर्न एभोकाडो होटलमा ५ दिनसम्म नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । विवाद बढेपछि त्यतिबेलाका आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा हाल माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलको पहलमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले आवश्यक छलफल गर्दै जाने र तत्काललाई बजेट पास गर्ने सहमति जुटेको पनि हो । बजेट पास गर्ने अनि सँशोधन गरेर दुई महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलको सरकार जोगिएको थियो ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा एमालेका मात्रै ५६ सांसद छन् । गत चुनावमा कूल ५८ सिट जितेको एमालेको भक्तपुरको उपचुनाव हारेपछि एक सिट घटेको थियो । पशुपति चौलागाईको निधनपछि एमालेसँग अहिले ५६ सांसद छन् । बागमतिमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका समान २३ सांसद छन् भने विवेकशील साझा ३,नेमकिपा २,राप्रपा,नयाँ शक्ति र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका एक-एक सांसद छन् । नयाँ शक्ति जसपामा फेरिएको छ भने राप्रपा एकीकृत भएका छन् । एमालेका ५६ सांसदमध्ये अहिले कम्तिमा डेढ दर्जन माधव नेपालनिकट रहेको बताइन्छ ।
परिस्थितिमा ठोस फेरबदल नआए माधव नेपाल पक्ष बजेट पास नगराउने तयारीमा रहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । त्यसो हुँदा सरकार ढल्ने र माओवादी,माधव खेमा र काँग्रेस मिलेर नयाँ सरकार बनाउने गरी आन्तरिक छलफल चलिरहेको बताइन्छ । काँग्रेस र माओवादीलाई माधव खेमाको ११ सांसदले मात्र साथ दिए पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने देखिन्छ । कम्तिमा रामबहादुर थापा बादलबिरुध्द राष्ट्रियसभाको उपचुनावमा खिमलाल देवकोटालाई मत दिएका १४ सांसद बजेटविरुध्द उभिन सक्ने स्रोत बताउँछ ।
अस्ति गण्डकीमा माधव नेपालका एकमात्र सांसद इन्द्र सापकोटाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई फोन गरेर भनेको कुरा सुनाउँदै उनले थपे, ‘विश्वासको मत दिनुको अर्थ जेमा पनि छुट दिनु होइन ।’